ABOn miseensota GS gidduu kana seera dhaabichaan ala socho’an irratti tarkaanfii fudhate – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooABOn miseensota GS gidduu kana seera dhaabichaan ala socho’an irratti tarkaanfii fudhate
Bal’insa isaa daqiiqaa muraasa booda isniif dhiheessina; nu hordofaa
Haala ABOn Keessa Jiru Irratti nuti Miseensota GS ABO biyya keessa jirruu fi Qaamni Hoggana ABO Olaanaan biyya alaa marii har’a: Hagayya 11, 2020 geggeeffanne irratti murtii kanatti aanee jiru fudhachuu keenya miseensotaa fi deeggartoota dhaabaa akkasumas ummata Oromoo fi jaalattoota qabsoo bilisummaa Oromootiif ibsuuf dirqamuu keenya beeksifna.
Dhaabni keenya ABOn erga qabsoo hidhannoo-malee(karaa nagaa) gaggeessuuf murteeffatee Boordii Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaa irraa eeyyama seera-qabeessummaa argatee kaasee sochiilee adda addaa taasisaa turuun beekkamaa dha. Akkuma irra deddeebi’ee ibsamaa ture sochii qabsoo karaa nagaa dhaabni keenya gaggeessaa jiru kana gufachiisuufis danqaaleen adda addaa qaamolee garaagaraatin taasifamaa jiraatanillee, murannoo qabsoo karaa nagaa eegale itti fufuuf qabuun hidhamuu hogganootaa fi miseensota keenyaa, cufamuu waajjiraalee fi rakkoolee biroo hedduu irra aanee waadaa ummataaf seenee wareegama qaalii itti baasaa yoon gahe galii isaa kan maayiitiin gahuuf qabsicha finiinsaa har’a gaheera; borus itti fufa.
Kun kanaan odoo jiruu, jidduu kana dhaaba keenya keessatti sochiileen afanfajjii uumanii fi heeraa fi seera ABO faallessan adda addaa taasifamaa kan jiran yoo tahu, kanneen irrattis heeraa fi seera dhaabaa irra dhaabbannee ejjennaa keenya akka itti aanutti hundaaf ifa goona.
Miseensonni Gumii Sabaa ABO naannawa istaafii(Waajjira ABO: Gullallee jirutti) argaman lakkoofsaan 7 tahan Adoolessa 16, 2020 wal gahuun haala yeroo irratti erga mari’atanii booda, yaada isaanii Hayyu-duree ABO Jaal Daawud Ibsaa fi Itti Aanaa HD-ABO Jaal Araarsoo Biqilaatiif barreeffamaan dhiyeessan. Jaal Araarsoonis Xalayaa miseensonni GS itti kennan kana HDtti kennuu fi qaamaanis wal arganii nagayummaa isaafi haala hojii dhaabaa irratti HD haasofsiisuuf Miseensa GS Jaal Malkaa Danuu waliin mana Jireenyaa Jaal Daawud dhaqan. Jaal Daawud waliin qaaman wal arganii erga mari’atanii boodas hogganoota GS yaadicha gumaachaniif ibsa barbaachisaa laatudhaaf akka jiranitti osoo eegamuu Adoolessa 26 fi 27, 2020 walgahiin miseensota GS hanga tokko qofa hirmaachise waajjira Gullalleetti taa’amuun dhagahame. Walgahichis haala yeroo irratti mari’achuun akka yaada gumaachuutti hubatamee odoo jiruu, walgahii GS kan hatattamaa jedhamee ibsamuu fi xumura irrattis maqaa GS-ABOtiin ibsi miidiyaalee hawaasaa(social Media) qofaa irratti bahuu dhageenye.
Asirratti, Jaallan 7n haala jirurratti yaada furmaataa dhiyeessan malee, walgahiin Gumii Sabaa akka gaggeeffamuuf waamichi taasisaniif hin turre. Akkasuma kanneen biroo naannawa Istaafii turanii fi Godinaalee irraa waamamanis walgahiif waamamuu malee, walgahiin GS hatattamaa akka gaggeeffamuuf waamichi taasisan hin turre. Haala kana keessatti akka miseensonni Gumii Sabaa walgahiin GS kan hatattamaa akka gaggeeffamuuf gaafataniitti kan dhiyeeffame dogoggora tahuun jala sararamuu qaba.
Adeemsi kunis heeraa-seera dhaabaa kan cabsu tahuun hubatamee, dhimmichas Koreen Naamusaa fi Tohannoo(KNT) ABO qoratee akka furmaata itti kennu taasifame. KNTn hogganoonni fi miseensonni dhaabaa murti dhimma kanaa KNT-tti dhiisanii dirqama qabsoo itti jiranitti akka fuuleffatan waamicha dhiyeesse.
Sana boodas ibsi hogganoonni dhaabaa tokko tokko sabaa-himaalee irratti laatan heeraa fi seera dhaabaatin fudhatama kan hin qabne tahuu KNTn haasaa Miseensi Shanee Gumii ABO J/ Atoomsaa Kumsaa Miidiyaa HNN irratti taasisan ilaalchisuun ibsa baaseen akeekuun, hogganoonni fi miseensonni dhaabaa tarkaanfilee akkasii irraa of qusatanii murtii seera akka eeggatan dhaamuun ni beekkama.
Bakka hundumtuu murtii KNT eeggataa dirqama qabsoo itti fufaa jirutti, Hagayya 1, 2020 HDn ABO Jaal Daawud Ibsaa humnoota nageenyaa mootumaatin waajjira Gullalleetii fuudhamanii mana jireenyaa isaaniitti yoo deebifaman, Itti aanaan HD-ABO Jaal Araarsoo Biqilaa dabalatee hogganoonni fi miseeensonni dhaabaa biroonis waajjira akka hin seenne dhoowwamuudhaan waajjirichis waraanaan eegamuu eegale. Dhimma kanarratti HD fi Itti Aanaan HD mana jireenyaa Jaal Daawuditti qaamaan wal arganii marii taasisanii ibsa waloo miidiyaaf laataniin, humni poolisaa waamicha HDniss tahee I/A HDtin ala dhufuu eerudhaan, waliigalatti heeraa fi seerri dhaabaa cabuun walqabatee rakkoo dhalate karaa KNTtin akka furamuu fi qaamni biraa kamiyyuu akka harka keessaa baafatu ibsan.
Kun Kanaan odoo jiruu, bakka HD ABO fi I/A HD ABO dabalatee miseensonni hundi waajjira dhaabaa muummeerraa ugguramanii waajjirichi humna poolisaan eegamaa jiruu fi HDn akka tana duraa uggura jala hin jirretti, Hagayya 10, 2020 quba-qabeenya HD-ABO Jaal Daawud Ibsaatin ala ibsi gaazexaa magaalaa Finfinnee Hoteela Hiiltanitti maqaa ABOtiin Itti Aanaa HD Jaal Araarsoo Biqilaa, miseensa Shanee Gumii ABO Jaal Toleeraa Adabaa fi miseensa Gumii Sabaa Jaal Qajeelaa Mardaasaatin miidiyaaleef kenname kan ABO akka hin ta’ini fi Jaallan kun maqaa ABO tin ibsa akkanaa kennuuf mirga kan hin qabne ta’uu hubachiisaa, Jaallan kun Heera-seera ABOf abboomamuu fi hubachiisa KNT dhaan irra daddeebi’amee kennamaa jirus didanii ABO fi QBO keessatti afanfaajjii uumuu itti fufuun isaanii ABO fi QBO gaga’amaa hamaaf waan saaxiluuf, Jaallan gochaa kana keessatti qooda qaban, Itti aanaa HD-ABO J/ Araarsoo Biqilaa dabalatee J/ Toleera Adabaa, J/ Atoomsaa Kumsaa, J/ Jabeessaa Gabbisaa, J/ Ibsaa Nagoo fi J/ Qajeelaa Mardaasaa irratti marii har’a- Hagayya 11, 2020 geggeeffanneen murtii heera fi seeraa kana fudhannee jirra.
Jaallan maqaan isaanii olitti eerame Jahan kanneen (Itti aanaa HD-ABO J/ Araarsoo Biqilaa, J/ Toleera Adabaa, J/ Atoomsaa Kumsaa, J/ Jabeessaa Gabbisaa, J/ Ibsaa Nagoo fi J/ Qajeelaa Mardaasaa) guyyaa har’aa irraa kaasee hamma Koreen Naamusaa fi To’annoo(KNT) qormaata itti jiru xumuree itti baha isaa dhaabaaf dhiheesee dhimmi isaanii murti argatutti, hujii dhaabaa kan guyya-guyyaa isaan gaggeessan irraa ajaja kamuu akka hin fudhatne beeksifna. bakka keenyaa bu’anii ibsas tahe dirqama isaan kennan akka ABO bakka hin buune beeksifna.
Hogganoonni, qondaalotni fi miseensoonni biyya keessaa fi biyyoota alaatti hujii dhaabaa irratti ramadamtanii hojjachaa jirtan hundi, hanga murti KNT fudhatuu Jaallan kana waliin qunnamtii qabdan guyyaa kana irraa kaaftanii akka dhaabdan, ajaja bifa kamiituu Jaallan kanneen irraa fudhattanii akka hujii irra hin oolchine isiniif dhaamna.
Boordiin Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaatis dhimma kanarratti hanga qaama seeraa dhaabaa ol’aanaa kan ta’e Koree Naamusaa fi To’annootin murtiin maayii laatamutti, hogganoota 6n kanneen hojii ABO bifa kamiirraayyuu dhaabuu keenyaa fi sochiin isaan taasisan ABO kan bakka hin buune tahuu hubachiifna.
Qaamni sochii seeraan alaa kan quba-qabeenya dhaabaatin alaa kana fudhate adeemsa itti jirurraa dhaabbatee rakkoo dhalate karaa heeraa fi seera dhaabaa qofaan furuutti akka fuuleffatuu fi murtii KNT eeggatu irra deebinee hubachiisaa, qaamni kanaan ala socho’u kamiyyuu ABO kan bakka hin buune tahuu firaafis diinaafis gadi jabeessinee hubachiifna.
Qaama seeraa ol’aanaa kan tahe Koreen Naamusaa fi To’annoo(KNTn) dhimma heeraaseera ABO cabse kana ofitti fudhatee murtiif hojjetaa jiraachuun kan hubatamu tahullee, dhimmicha osoo yeroo itti hin laatin itti baha qorannoo fi murtii isaa daddaffiin akka ibsu jabeessinee gaafanna.
Barootaaf wareegama qaaliin QBO sadarkaa har’aa irraan kan geessan miseensonni dhaabaa biyya keessaa fi biyyoota alaa jirtanis heeraa fi seera dhaaba keessanii tiksuun haasawa hin feesisne irraa of qusattanii murtii KNTn laatamu akka eeggattan hubachiifna. Kanuma waliin shiraa fi adeemsa farrummaa bifa kamiituu Heeraa fi seera ABO faallessuu fi dhaaba keenya gaaga’uutti akeekkate hunda dammaqiinsaan akka tiksitani fi fashalsitan waamicha dhiyeessina.
Hogganoonni haqaa alaa fi biyya keessaa akkasumas miseensonni heeraa fi seera dhaabaaf waadaa keessan tiksitanii jirtan, hojii qabsoo waliigalaa eegalle finiinsuu, dhaaba keenyaa fi qabsoo keenya akka qaroo ija keenya tiksuu fi caasaa jajjabeessuu fi karoora haaromsuu irratti akka fuulleffattan.
Miseensotni, qondaalotni, Hogganootni fi deggartootni ABO akkasumas hidhamtootni siyaasaa Oromoo hundi akka daddaffiin hiikaman sagalee tahuufii keenya nuffi tokko malee akka itti fufnu waamicha dhiyeessina.
Deeggartoonni ABO fi waliigalatti abbaan qabsichaa ummanni Oromoo ololaa fi afanfajjii adda addaatin odoo hin dagamin, akkuma kaleessaa dhaaba keessan ABO akka qarayyoo ija keessaniitti akka tikfattan, tin’istanii fi jabeessitan dhaammanna.
Nuti miseensonni GS-ABO biyya keessaa fi Qaamni Hoggana ABO olaanaan biyya alaa imaanaan Korri Sabaa ABO nutti laate fi galfatni jaallan wareegamanii nu harka jirus, heeraa fi seera dhaabaa kan kabajnu tahuu hubachiisaa, dhaaba keenya seeraa-dhablummaa fi shira bifa kamiirraayyuu baraarree akeeka isaa galiin gahuuf wareegama feesisu hunda kafaluuf qophii tahuu keenya irra deebiin mirkaneessina.
Nuti Hogganoonni dhaabaa murtii armaan olii kana fudhanne Miseensota Gumii Sabaa ABO Biyya keessa jirru akkasumas qaama hoggana ABO ol’aanaa biyyoota alaa ti.
Miseensota Gumii Saba ABO Biyya keessaa fi Qaama Hoggana ABO Olaanaa Biyyoota Alaa